ပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံဖြစ်အောင် စားသောက်မှုပုံစံကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားကြမလဲ? In:Kawi Eats
အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို အတွေးအခေါ်နဲ့ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ? In:Inspiration/Aspiration/Motivation, Kawi Inspires
ပါ၀င်ပစ္စည်း (၃) မျိုးတည်းနဲ့ မြန်လည်းမြန်၊ လွယ်လည်းလွယ်တဲ့ ဟင်းချက်နည်းများ In:Kawi Eats, Others
သင့်အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်စေမယ့် အင်အားများ In:Kawi Inspires, Life Hacks
လက်ဝှေ့ကစားသမားဘဝကနေ ONE Championship ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူ Chatri Sityodtong အကြောင်း In:Kawi Inspires, Life Hacks
Kawi Inspires at Samsung QLED 8K TV Launch Event In:Kawi Inspires, Videos
မိုးရာသီမှာ ကျန်းမာအောင်နဲ့ တုပ်ကွေးမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲ? In:Kawi Inspires, Life Hacks
သားသားမီးမီးလေးတွေအတွက် ချစ်စရာ ထမင်းဗူးပြင်နည်း In:Kawi Eats
အားကစားလိုက်စားသူတွေအနေနဲ့ ဘောလုံးသမားပဲဖြစ်စေ၊ လက်ဝှေ့သမားပဲဖြစ်စေ၊ ယောဂကျင့်သူပဲဖြစ်နေစေ၊ ကာယအလှအတွက်ပဲကြိုးစားနေပါစေ ကိုယ့်နယ်ပယ်မှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူချန်ပီယံဖြစ်မလဲ? သင်ဒီအတိုင်းထိုင်နေရုံနဲ့တော့ အကောင်းဆုံးဆိုတာ ရမလာနိုင်ပါဘူး။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကစားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ ကိုယ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကိုယ်ယှဉ်ပြိုင်နေရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိပေးလေ့ရှိကြတယ်မဟုတ်လား? ငါအရင်ကထက်ပိုသန်မာလာရမယ် ပိုကောင်းလာရမယ်လို့… အထူးသဖြင့် အားကစားပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် အားကစားရူးသွပ်သူတွေနဲ့ တကယ့်အားကစားသမားတွေဟာ ရိုးရိုးသာမန်အားကစားလိုက်စားသူတွေထက် ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ရပါတယ်၊ ဒါမှလည်း သူများတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရမှာပါ။ အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမား တစ်ယောက်မှာ သတိထားပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်တာတွေက ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်မှု နဲ့သင့်တင့်မျှတတဲ့အာဟာရပုံစံ တို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်လုပ်နေတဲ့အားကစားပေါ်မူတည်ပြီး လေ့ကျင့်မှုပုံစံတွေက ကွာသွားမှာပါ။ များသောအားဖြင့် ခံနိုင်ရည် (endurance) နဲ့ ခွန်အား (strength) လိုတဲ့အားကစားနည်းတွေဟာ ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ရတဲ့အတွက် စွမ်းအင်အရမ်းသုံးရပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိရှိနဲ့ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်နိုင်စေဖို့ လုံလောက်တဲ့အာဟာရကို ခန္ဓာကိုယ်ကရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမားတစ်ယောက်အတွက် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည် (peak performance) ရရှိဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး အာဟာရပုံစံ (optimal nutrition) ဟာ လေ့ကျင့်မှု (physical training) နည်းတူအရေးပါပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… အကောင်းဆုံးအာဟာရ ဆိုတာဘာလဲ? အကောင်းဆုံး အာဟာရဆိုတာ ကစားသမားတစ်ယောက်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး အာဟာရပုံစံ ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒီအတွက်ဆိုရင် စားသောက်မှုပုံစံ (meal plan)လုံလောက်တဲ့ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးခြင်း (hydration)ခန္ဓာကိုယ်ကို လုံလောက်စွာ အနားပေးခြင်း (adequate sleep and rest) တို့ပါ၀င်ပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… အားကစားသမားတစ်ယောက်စားသင့်တဲ့ပုံစံ (Healthy meal plan for athletes) အားကစားသမားတစ်ယောက်က ပြိုင်ပွဲမဝင်ခင် အဓိကပြင်ဆင်သင့်တဲ့အထဲမှာ စားသောက်မှုပုံစံက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အားကစားသမား တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လေ့ကျင့်မှုမတူတဲ့အတွက် meal plan လည်း မတူနိုင်ပါဘူး။ Meal plan တစ်ခု အစီအစဉ် ချတော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးစဉ်းစားရမှာက လိုအပ်တဲ့ကယ်လိုရီပမာဏပါ။ Endurance sports (eg. football, triathlon) လိုုမျိုး အားကစားတွေဟာ ပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ရတဲ့အတွက် စွမ်းအင်အရမ်းလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် သူတို့ဟာ တစ်နေ့တာအတွက် ကယ်လိုရီတွေ အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ Michael Phelps လိုရေကူးချန်ပီယံတစ်ယောက်အတွက် တစ်နေ့တာကယ်လိုရီ လိုအပ်ချက်ဟာ (3,000 to 10,000 kcal) ကယ်လိုရီ (၃,၀၀၀) ကနေ (၁၀,၀၀၀) အထိရှိနိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အားကစားသမားတစ်ယောက်အတွက် ကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် သာမန်လူတစ်ယောက်တစ်နေ့တာအတွက် လိုအပ်တဲ့ကယ်လိုရီပမာဏ (2000 kcal) + လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်သုံးစွဲရမယ့် ကယ်လိုရီပမာဏဆိုပြီး ခန့်မှန်းတွက်ချက်လို့ ရပါတယ်။ ကိုယ်စားမယ့် ကယ်လိုရီပမာဏတွက်ပြီးပြီဆိုရင် အဲဒီကယ်လိုရီတွေကို ဘယ်ကယူရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားရပါမယ်။ ကစီဓာတ်၊ အသားဓာတ်နဲ့ အဆီဓာတ် ဆိုပြီး အာဟာရအုပ်စုကြီး ၃ အုပ်စုရှိပါတယ်။ ကြွက်သားထုတင်နေတဲ့သူ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းချင်တဲ့သူ စသဖြင့် ကိုယ့် goal ပေါ်မှာမူတည်ပြီး အဓိကထား စားသုံးရတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေလည်း ကွဲပြားသွားပါတယ်။ အားကစားသမားတွေဟာ စွမ်းအင်ရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက် ကစီဓာတ်စားသုံးမှု အလွန်အမင်းလျှော့ချခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ အာဟာရအုပ်စု အားလုံးမျှတအောင်စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ဒီမှာအရေးကြီးတာက အစားအသောက်ရဲ့ အရည်အသွေးပါ။ ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုမိုသင့်တော်တဲ့ အစားအသောက်မျိုးပေါ့ … ဥပမာ ကစီဓာတ်အတွက်ဆိုရင် ထမင်းဖြူအစား ဆန်လုံးညို၊ ဂျုံကြမ်း စတာတွေဟာ အမျှင်ပါ၀င်မှုပိုများတဲ့အတွက် ဒီလိုကျန်းမာရေးနဲ့ ပိုညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို အစားထိုးစားသင့်ပါတယ်။ သကြားပါ၀င်မှုများတဲ့ မုန့်အချို၊ ကိတ်မုန့် စတာတွေအစား ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုသင့်တော်တဲ့ အသီးအနှံတွေစားပေးလို့ရပါတယ်။ အသားဓာတ်ဆိုရင်လည်း ၀က်သားစတဲ့ အဆီပါ၀င်မှုများတဲ့အသားတွေထက် ကြက်သား၊ ငါး၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ပဲနို့ အစရှိတာတွေစားလို့ရပါတယ်။ အဆီဓာတ်အတွက်ဆိုရင်လည်း ပြည့်ဝဆီတွေဖြစ်တဲ့ စားအုန်းဆီ နဲ့ အသားမှရတဲ့ အဆီတွေအစား ဗာဒံစေ့၊ သီဟိုဋ္ဌ်စေ့ စတဲ့ အစေ့အဆန်များ၊ သံလွင်ဆီ၊ ထောပတ်သီး၊ ငါးကြီးဆီ စတာတွေစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ အစားအသောက်ပြင်ဆင်ရာမှာလည်း ကြော်မယ့်အစား ပေါင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်စားလို့ ရပါတယ်။ မနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာတွေအတွက်သာမကပဲ အဆာပြေစားစရာတွေကိုပါ သစ်သီး၊ ဒိန်ချဉ် စတာတွေနဲ့ အစားထိုး စီစဉ်ထားလို့ရပါတယ်။ အစားအသောက်တွေကို သေချာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဟာ အပြင်စာတွေစားမိတာ၊ လိုတာထက်ပိုစားမိတာ စတဲ့အကျင့်တွေကိုလည်း လျှော့ချပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ နေ့စဉ်စားသောက်မှုပုံစံကို အကျန်းမာဆုံးရွေးချယ်မှုတွေ လုပ်သွားဖို့ပါ။ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးခြင်း လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ရေဓာတ်တွေနဲ့ အဓိကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက် လုံလောက်စွာရေဓာတ်ဖြည့်ပေးဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းအပြင်းအထန်လုပ်လို့ ချွေးထွက်သွားတဲ့အခါ ရေဓာတ်သာမက ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ ဆားဓါတ်တွေပါ ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ ချွေးထွက်လွန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရာသီဥတုအရမ်းပူတာပဲဖြစ်ဖြစ် ခန္ဓာကိုယ်ကဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေဓာတ်တွေကို ပြန်ဖြည့်ပေးရပါမယ်။ မဟုတ်ရင် ကြွက်တက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း စတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အားကစားသမားတွေအနေနဲ့ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းတဲ့အခါမှာ ရေသာမကဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ဆားဓာတ် နဲ့ electrolytes တွေကိုပါ ပြန်ဖြည့်ပေးဖို့ 100PLUS လို Isotonic Drink (ရေဓာတ်ဖြည့် အချိုရည်) ဒါမှမဟုတ် ဓာတ်ဆားရည်တွေကိုပါ သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… အိပ်စက်ခြင်း လေ့ကျင့်ခန်းအပြင်းအထန်လုပ်ထားတဲ့ ခန္ဓာကိုုယ်တစ်ခုဟာ အစားအသောက် သေချာစားပေးရုံတင်မကဘဲ ကြွက်သားတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ လုံလောက်စွာအနားယူဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝရင် အာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းခြင်း၊ အမောမခံနိုင်ခြင်း၊ ကြွက်သားပြန်လည်သန်စွမ်းချိန်နည်းတဲ့အတွက် အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်ကျခြင်း စတာတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် အားကစားတစ်ယောက် ဟာ လုံလောက်တဲ့အိပ်ချိန်ရဖို့ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ ဒီအချက်တွေကို သင်သေချာပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ သင်ဟာပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့တစ်ဝက် ရယ်ဒီဖြစ်နေပါပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်။ သင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီဆိုရင် ဒီအကောင်းဆုံးကို ဘယ်လိုဆက်ထိန်းထားမလဲဆိုတာ မဆုံးနိုင်တဲ့စိန်ခေါ်မှုအဖြစ်ရှိနေမှာပါ။ Reference: https://www.uwhealth.org/health-wellness/eating-for-peak-performance/45232?fbclid=IwAR1cyWdH2NEskTTKVGQuaiIV0a_LprUwm5G-zRlIbguzFDcEEOYMj0WrRxM ...
အတွေးအခေါ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ မတိုးတက်စေတဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ တိုးတက်စေတဲ့အတွေးအခေါ် ဆိုပြီးတော့ပါ။ (၁) မတိုးတက်စေတဲ့အတွေးအခေါ်ဆိုတာ အမြဲတမ်း ဆင်ခြေတစ်ခုကိုရှာနေတတ်တဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်မျိုးပါ။ ဒီအတွေးအခေါ်မျိုးရှိတဲ့လူက အရာတစ်ခုကို ကောင်းမွန်စွာ မလုပ်ဆောင်နိုင်လိုက်တာနဲ့ ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါ ဆင်ခြေတစ်ခုကိုရှာဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ “ငါမှ ဒီအရာကို မကျွမ်းကျင်သေးတာ”၊ “ငါက ဒီအပိုင်းမှာ သိပ်မတော်ဘူး ဒါကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တာ” စတဲ့ ဆင်ခြေမျိုးတွေပါ။ တခြားဥပမာတွေ မပေးတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ ဥပမာပေးလိုက်ပါတော့မယ်။ ကျွန်တော်အရင်ကဆိုရင် content တစ်ခုရေးဖို့ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ဒီ content ကိုပေးရမယ့် နောက်ဆုံးအချိန်မတိုင်ခင်အထိ အချိန်ဆွဲဖို့ ဆင်ခြေတွေကိုရှာလေ့ရှိပါတယ်။ “မီးပျက်နေလို့၊ တခြားလုပ်စရာရှိလို့” ကစပြီး “နောက်နေ့မှရေးလိုက်တော့မယ်၊ အခုသိပ်ရေးချင်စိတ်မရှိဘူး” ဆိုတာတွေအဆုံး ဆင်ခြေတွေမျိုးစုံတွေးပြီး နောက်မှလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ အချိန်တွေတော်တော်များများကို ဘာမှမဟုတ်ဘဲ ကုန်ဆုံးလိုက်ပါတယ်။ Deadline နီးလာတော့မှသာ လောလော၊ လောလောနဲ့ ဝရုန်းသုန်းကားလုပ်လေ့ရှိတာပါ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့စာကို မကောင်းဘူး၊ အဆင်မပြေဘူးလို့ သိရတဲ့အခါမှာလည်း ကျွန်တော်က ကိုယ့်ကိုကိုယ် “ငါ ဒီအပိုင်းမှာ သိပ်မတော်ဘူး”၊ “ဒီအပိုင်းကိုမရေးတတ်သေးဘူး” လို့ပဲ ဆင်ခြေပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် deadline မမှီတဲ့အခေါက်တွေမှာ content ကိုအဆင်ပြေလောက်ရုံပဲပြင်ပေးလိုက်ပြီး လက်လျှော့လိုက်ပါတော့တယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်ရေးထုတ်လိုက်တဲ့ content တစ်ခုက အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို မရောက်သွားပါဘူး။ ကျွန်တော်သေချာရေးရင် ဒီထက်ကောင်းနိုင်သေးတယ်ဆိုပေမယ့် ဆင်ခြေတွေနဲ့ပဲ ကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုအတွေးအခေါ်မျိုးက မတိုးတက်စေတဲ့အတွေးအခေါ်မျိုးပါ။ စာရေးတာမှမဟုတ်ဘဲ က တခြား ဘယ်အရာမျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဆောင်ရင်း အဆင်မပြေတာတွေ ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါ ဆင်ခြေတွေနဲ့့ပဲ နောက်ဆုတ်သွားတတ်တဲ့ အကျင့်တစ်ခု၊ အတွေးအခေါ်တစ်ခု ဝင်နေပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်ဒီဆင်ခြေတွေကို ဖျောက်လိုက်ပြီး content ကိုစောစောလေးနဲ့ ကောင်းကောင်းလေးကြိုရေးမယ်၊ ကျွန်တော့်ထက်သိတဲ့တတ်တဲ့လူတွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခံယူပြီး သေသေချာချာပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင် content ကောင်းလေးတစ်ခုထွက်လာမှာဖြစ်သလို ကျွန်တော်လည်း အဲဒီရေးတဲ့အပိုင်းမှာ တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာ ကျွန်တော့်လိုဆင်ခြေပေးတတ်တဲ့၊ မတိုးတက်စေတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုးရှိနေတယ်ဆိုရင် စိတ်မပူပါနဲ့ အတွေးအခါ်ဆိုတာ ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………………………… (၂) တိုးတက်စေတဲ့ အတွေးအခေါ်။ တိုးတက်စေတဲ့ အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့လူတွေက ဇွဲရှိရှိနဲ့ အရာရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးရှိတဲ့လူတွေပါ။ ကျရှုံးမှုနဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေကို ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါ ဆင်ခြေတွေရှာပြီး အရှုံးပေးမယ့်အစား အမှားတွေကို သင်ခန်းစာအဖြစ် သင်ယူလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုအတွေးအခေါ်မျိုးက စိတ်အခြေအနေကိုသာမက လူကိုပါတိုးတက်စေပါတယ်။ ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ဆင်ခြေပေးတတ်တဲ့၊ တိုးတက်မှုကို ရပ်တန့်စေတဲ့ အတွေးအခေါ်က ကျွန်တော့်ကိုဒုက္ခပေးနေတာကို ကျွန်တော် သတိထားမိတဲ့အချိန်မှာ ပြင်ဖို့ကြိုးစားရပါတော့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်အလုပ်မှာ အချိန်တွေတော်တော်များများကို ဆင်ခြေတွေ၊ အချိန်ဖြုန်းမှုတွေနဲ့ ကုန်ဆုံးခဲ့တာကြောင့်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော် ဆင်ခြေတွေကိုဖျောက်ပြီး ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ဖို့လိုလာပါတယ်။ ကျွန်တော်မှားခဲ့တဲ့ အမှားကနေသင်ယူဖို့လိုလာပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အတွေးအခေါ်ကို ပြောင်းလဲဖို့လိုလာပါတယ်။ ဒီလိုပြောင်းလဲဖို့ ပထမဆုံး ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုဆင်ခြေမျိုးတွေပေးမိတတ်လဲလို့ ပြန်တွေးပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ဒီလိုဆင်ခြေမျိုးတွေပေးမိတိုင်း “ငါ ဆင်ခြေတွေပေးမိနေပြန်ပြီ၊ ငါဒီအလုပ်ကို အကောင်းဆုံးလုပ်ရမယ်” လို့ သတိပေးပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ စိတ်မခိုင်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းတော့ တဖြေးဖြေး အဆင်ပြေလာပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်အလုပ်မှာ အသစ်ရောက်လာတဲ့အစ်မဆီကနေ သင်ယူရရှိလိုက်တဲ့ နည်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲအစ်မက ထမင်းစားချိန်အထိ အလုပ်နေတာကြောင့် “အစ်မ ထမင်းမစားသေးဘူးလား” လို့မေးလိုက်တော့ အဲအစ်မက “ရတယ်မောင်လေး၊ အစ်မဒီဟာလေးမပြီးသေးမချင်း ထမင်းမစားသေးဘူး” လို့ပြန်ဖြေပါတယ်။ ဒါက အလုပ်လုပ်တဲ့ဇွဲတစ်မျိုးလို့ ကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆင်ခြေပေးတတ်တဲ့ ကျွန်တော် အဲဒီအခိုက်အတန့်မှာ သဘောပေါက်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခု၊ content တစ်ပုဒ် မပြီးမချင်း ထမင်းမစားဘူး၊ ဆေးလိပ်ထမသောက်ဘူးဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကကျွန်တော်အတွက် နည်းနည်းတော့ အထောက်အကူဖြစ်သလို၊ ဆင်ခြေပေးတတ်တဲ့အကျင့်ကိုလည်းဖျောက်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။ အကျင့်ဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော် အလုပ်တွေလည်း ပိုပြီးလာသလို ယောင်ချာချာနဲ့ အလုပ်မှာဒီအတိုင်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အချိန်တွေလည်း နည်းလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတွေးအခေါ်က လူတစ်ယောက်ရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်နိုင်တယ်လို့ ဆိုထားတာပါ။ လူတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအခေါ်ကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ အတွေးအခေါ်တစ်မျိုးကို တစ်သက်လုံးနီးပါးတွေးလာမိလို့ မပြောင်းလဲနိုင်တော့ဘူးဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နည်းတွေနဲ့ ပြောင်းလဲရမယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်အကြောင်းကို သေချာလေ့လာပြီး ကိုယ်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့လည်း ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှားယွင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေရှိနေလားဆိုတာ သတိထားမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆင်ခြေတွေနဲ့ သက်သာဇုန်မှာပဲနေပြီး အလုပ်တွေကို ပြီးစလွယ်လုပ်ရင်း မှားယွင်းတဲ့အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ပြောင်းလဲဖို့သတိထားမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ …………………………………………………………………………………………………………………… နောက်ပြီး ကိုယ်ကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်၊ ကိုယ်ရဲ့လက်အောက်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီအချက်ကို နားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေမှာ မှန်ကန်တဲ့တွေးခေါ်မှုရှိရဲ့လား? တိုးတက်စေတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုးရှိရဲ့လား? ဆိုတာတွေ ဆန်းစစ်ဖို့တာဝန် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှာ ရှိပါတယ်။ သူတို့တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ တိုးတက်မှုက သင့်ရဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလုံး၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တာကြောင့်ပါ။ သူတို့တစ်ယောက်ချင်းစီမှာ မှန်ကန်တဲ့အတွေးအခေါ်ရှိဖို့နဲ့ မရှိသေးရင်ရှိလာအောင်လုပ်ပေးဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ တိုးတက်အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးမှာ မှန်ကန်တဲ့အတွေးအခေါ်ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း မြှင့်တင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Reference: https://www.goalcast.com/2018/05/22/how-to-start-living-up-full-potential-right-now/ -ဒိုရီ ...
ဟင်းချက်စရာအမျိုးအမည်တွေ အများကြီးထည့်မှ အရသာရှိတဲ့ဟင်းတွေ ချက်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရှိတဲ့ဟင်းချက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ရအောင်ချက်တတ်တာကလည်း အိမ်ရှင်မတွေရဲ့ ဟင်းချက်ပညာတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း (၃) မျိုးလောက်ရှိရုံနဲ့ ဒီလိုဟင်းတွေချက်လို့ရနေပြီဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လို ဟင်းတွေချက်လို့ရလဲဆိုတော့- (၁) ကြက်သားအချိုချက် ပါ၀င်ပစ္စည်း – ကြက်ပေါင်သား၊ သကြားညို၊ ပဲငံပြာရည် ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ အမြင့် (၂) လက်မနဲ့ အကျယ် (၃) လက်မ လောက်ရှိတဲ့ ပန်းကန်လုံးခပ်သေးသေးထဲကို ခွက်ရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံလောက် သကြားညိုထည့်လိုက်ပါ။ ပဲငံပြာရည်ကိုတော့ နောက်ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးယူပြီး သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ထည့်ပါမယ်။ ကြက်ပေါင်သားတွေကို အနေတော် အရွယ်အစားလောက်လှီး? ဆီနည်းနည်းနဲ့လှိမ့်ပါ။ ကြက်သားကျက်လောက်ပြီဆိုရင် ပဲငံပြာရည်နဲ့ သကြားညိုထည့်ပြီး အနှစ်ဖြစ်တဲ့အထိ မွှေနေပေးပါ။ အနှစ်လည်း အနေတော်လောက်ဖြစ်ပြီး ကြက်သားလည်းမွှေးနေပြီဆိုရင် စားလို့ရပြီလေ။ …………………………………………………………………………………………………. (၂) ဆာလ်မွန်ငါးမီးဖုတ် ပါ၀င်ပစ္စည်း – ဆာလ်မွန်ငါး၊ Sweet Chili Sauce၊ ကြက်သွန်မြိတ် Sweet Chili Sauce ကို အချဉ်ရည်ထည့်စားတဲ့ ပန်းကန်လုံးသေးသေးလေးထဲကို အပြည့်ထည့်ထားပါ။ ဆာလ်မွန် အသားတုံးကြီးကြီး (၃) တုံးလောက်ကို ဗူးခပ်ကြီးကြီးထဲထည့်ပြီး စောစောက အချဉ်ရည်ရယ် ကြက်သွန်မြိတ်ရယ်ကို လောင်းထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အသားထဲစိမ့်ဝင်သွားအောင် လက်နဲ့အသာအယာနယ်ပေးပါ။ နောက်ပြီး 400°F/ 200°F မှာထားပြီး (၁၅) မိနစ်လောက် Microwave ထဲထည့် ဖုတ်ပြီးရင်တော့ Steak အနေနဲ့ပဲစားစား၊ ဟင်းအနေနဲ့ပဲစားစား ကြိုက်သလိုစားလို့ရပါပြီ။ …………………………………………………………………………………………………. (၃) Mac and cheese ပါ၀င်ပစ္စည်း – ပါစတာ၊ cheddar အမျှင်၊ နွားနို့ ပန်းကန်လုံး (၁) လုံးစာအနေထားလောက် စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နွားနို့ကို ပန်းကန်လုံး (၁)လုံးနဲ့ တစ်ဝက်ခန့်လောက် အသုံးပြုရင်ရပါပြီ။ အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာကတော့ နွားနို့ကို ကျိုရပါမယ်၊ ပွက်လာရင် ပါစတာထည့်လိုက်ပြီး နွားနို့တွေ အရည်ခမ်းသွားပြီး ပါစတာတွေ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု စေးကပ်ကပ်ဖြစ်သွားတဲ့အထိ မွှေပေးပါ။ ပြီးရင် cheddar အမျှင်ပါထည့်ပြီး ဆက်မွှေပါ။ Cheddar တွေ အရည်ပျော်သွားပြီးရင်တော့ စားလို့ရပြီပေါ့။ …………………………………………………………………………………………………. (၄) ကြက်အူချောင်း ချိစ် ကြော် ပါ၀င်ပစ္စည်း – ကြက်အူချောင်း၊ cheddar အပြား၊ ဂျုံမုန့်အကာ ဂျုံမုန့်အကာပေါ်မှာ cheddar အပြားကိုတင်၊ ကြက်အူချောင်းကိုပါတင်ပြီး လိပ်လိုက်ပါ။ လိပ်ပြီးရင် (၁)လိပ်ကို (၃) တုံးစာလောက်လှီးပါ။ နောက်ပြီး 425°F /220°F မှာ (၁၅) မိနစ်စာလောက် Microwave ထဲထည့်ပြီး ဖုတ်ပေးပါ။ ချိစ်လေးတွေအရည်ပျော်လာ၊ ဂျုံမုန့်အကာလေးလည်း ကျွတ်ကျွတ်ရွရွ ဖြစ်လာတော့ တစ်ကိုက်ကိုက်လိုက်တိုင်း အီလည်းမအီဘဲ၊ ချိုစိမ့်စိမ့်နဲ့စားလို့ကောင်းနေရောပေါ့။ …………………………………………………………………………………………………. (၅) ချိုစိမ့်စိမ့် ချိစ်ကြော် ပါ၀င်ပစ္စည်း – ကြက်ဥလိပ်အပြား၊ ချိစ်အချောင်း၊ ရေ ကြက်ဥလိပ်အပြားက ကြီးနေတယ်ထင်ရင် တစ်ဝက်လောက်ဖြတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ချိစ်အချောင်းကို ကြက်ဥလိပ်အပြားပေါ် ထည့်လိပ်ပါမယ်။ လိပ်တဲ့အခါ ကွာမကျနိုင်တဲ့ သပ်ရပ်တဲ့အလိပ်လေးဖြစ်အောင် အနားသတ်တွေကို ရေနဲ့စွတ်ပြီး ကပ်ပေးပါ။ ပြီးရင် အိုးထဲကို ဆီများများထည့်ပြီး ဆီပူပူထဲ နှစ်ကြော်လိုက်ပါ။ …………………………………………………………………………………………………. (၆) ချောကလက် ထောပတ်မြေပဲကိတ် ပါ၀င်ပစ္စည်း – ထောပတ်မြေပဲ၊ ချောကလက်အရည်၊ သကြားပေါင်ဒါမှုန့် အမြင့် (၂) လက်မ၊ အကျယ် (၃) လက်မ အရွယ် ပန်းကန်လုံးသေးသေးထဲကိုထောပတ်မြေပဲ သုံးပုံတစ်ပုံခန့် ထည့်ပါ။ သကြားပေါင်ဒါမှုန့်ကိုလည်း ပန်းကန်လုံးနောက်တစ်လုံးထဲ သုံးပုံတစ်ပုံစာလောက် ထည့်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ထိုနှစ်ခုကို ခွက်အလွတ်ထဲ ပြောင်းထဲပြီး မွှေလိုက်ပါမယ်။ ပြီးရင် Cupcake ဖုတ်တဲ့ခွက်လေးတွေထဲကို cupcake စွတ်တဲ့ စက္ကူစလှလှလေးတွေ အရင်ထည့်လိုက်ပါ။ နောက်ပြီး အောက်ခြေမှာ ချောကလက်အရည်ကို အရင်လောင်းထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ထောပတ်မြေပဲကိုအလည်မှာ ထည့်ပြီး၊ ချောကလက်အရည်ကို အပေါ်ဆုံးမှာ နောက်တစ်ထပ် ပြန်ထည့်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ (၁) နာရီလောက် ထည့်ထားလိုက်ပေါ့။ …………………………………………………………………………………………………. (၇) Vanilla ချောကလက်ကိတ် ပါ၀င်ပစ္စည်း – oreo၊ ချောကလက်အရည်၊ vanilla ရေခဲမုန့် Oreoတွေကို တစ်ခါသုံး ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲထည့်ပြီး အမှုန့်ဖြစ်အောင် ချေလိုက်ပါ။ နောက်ပြီး ကိတ်မုန့်လုပ်လို့ရလောက်မယ့် ခွက်ခပ်ကြီးကြီး တစ်ခုစာထဲ အောက်ခြေအဖြစ်သိပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါ။ အပေါ်ကနေပြီး အရည်နည်းနည်းပျော်နေတဲ့ vanilla ရေခဲမုန့်ထည့်လိုက်ပြီး decoration အနေနဲ့ကတော့ေ ချာကလက်အရည်တွေကို zip zap ပုံစံ လောင်းထည့်လိုက်ပါ။ အကုန်လုံးပြင်ပြီးရင်တော့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ (၄) နာရီလောက် ခဲထားလိုက်ရုံပါပဲ။ Heavy meal တွေမဟုတ်ဘဲ၊ တကယ့်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေမို့ နေ့ခင်းနေ့လည် ဗိုက်ဆာရင်ပဲစားစား၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပျင်းပြေပဲစားစား သင့်တော်တယ်နော်။ ဒီတော့ လွယ်ကူလှတဲ့ ချက်နည်းလေးတွေကို လိုက်ချက်ပြီး မီးဖိုချောင်ထဲမှာအလုပ်ရှုပ်လိုက်ကြဦးနော်။😝😝😝 ...
၁) မိုင်ထောင်ချီဝေးတဲ့ခရီးဟာ ခြေတစ်လှမ်းကနေစတင်ရတာပါ။ (Lao Tzu) ၂) သင်ရည်မှန်းထားတဲ့အိပ်မက်တွေနဲ့ လုပ်ချင်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကို ရဲရဲရင့်ရင့်စတင်လိုက်ပါ။ ရဲရင့်ခြင်းမှာ ဉာဏ်ပညာကြီးမားခြင်းတွေ၊ စွမ်းအားတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းတို့ပါ၀င်တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (Johann Wolfgang von Goethe) ၃) သင်မပျံနိုင်တဲ့အခါပြေးပါ။ မပြေးနိုင်ရင်လမ်းလျှောက်ပါ။ လမ်းမလျှောက်နိုင်ရင် တွားပြီးသွားပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ သင်ဆက်ပြီးသွားနေဖို့ပဲ အရေးကြီးတာပါ။ (Martin Luther King Jr.) ၄) လုပ်ရဲရင်တော့ သင်လှမ်းနေတဲ့ခြေတစ်လှမ်းသာ ခဏတဖြုတ်ဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်ပြီး မလုပ်ရဲရင်တော့ သင့်ခြေလှမ်းတွေအကုန်ကို ဆုံးရှုံးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ (Søren Kierkegaard) ၅) မဖြစ်နိုင်တဲ့ခရီးဆိုတာမရှိပါဘူး။ မစတင်ရသေးတဲ့ခရီးပဲ ရှိပါတယ်။ (Tony Robins) ၆) ကျွန်တော့်ကို သစ်ပင်တစ်ပင်ခုတ်ဖို့ ၆နာရီအချိန်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး ၄နာရီကို ပုဆိန်သွေးတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ (Abraham Lincoln) ၇) သင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့သော့ချက်ကတော့ အောင်မြင်မှုအတွက် အာရုံစိုက်နေရမှာမဟုတ်ဘဲ သင့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ ခြေလှမ်းလေးတွေနဲ့ အောင်နိုင်မှုလေးတွေကသာ ပိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိနေမှာပါ။ (Oprah Winfrey) ၈) အောင်မြင်မှုကိုမရှာဖွေနိုင်လောက်အောင် မအားလပ်တဲ့သူတွေဆီမှာတော့ အောင်မြင်ခြင်းတွေက အမြဲရောက်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ (Henry David Thoreau) ၉) ကျွန်တော်တို့ ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်လေ့ရှိတဲ့အရာတွေက ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ဆောင်နေပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကောင်းတဲ့အရာတွေကို ခဏတာသာမဟုတ်ဘဲ အကျင့်တစ်ခုလို အမြဲလုပ်ဆောင်ပါ။(Aristotle) ၁၀) သင်တို့ရဲ့နေ့တိုင်းကို သင်တို့ဘာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့လဲ ဆိုတာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ပါ။ ဘာတွေရရှိခဲ့လဲဆိုတာနဲ့တော့ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ (Robert Louis Stevenson) ...
Wyndham Grand Hotel Yangon မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Samsung ရဲ့ QLED 8K တီဗွီ launch ပွဲကို ကဝိတို့တက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ Samsung က သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ တကယ့်အပြင်မှာကြည့်နေသယောင် မြင်တွေ့ရမယ့် QLED 8K TV အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ...
မိုးရာသီမှာ မိုးမိပြီး နေမကောင်းဖြစ်ကြတာ၊ တုပ်ကွေးမိပြီး နေမကောင်းဖြစ်ကြတာမျိုး ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုတွေ မဖြစ်အောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်လို့ ရမယ့် နည်းလေးတွေ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်! ၁။ ထီးတစ်ချောင်း အမြဲဆောင်ထားပါ။ ရုတ်တရတ် မိုးရွာချလိုက်လို့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် စိုရွှဲသွားတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အပူချိန်ဟာ ရုတ်တရတ် လိုက်ပြောင်းလဲပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် ဖျားတာ နဲ့ အအေးမိတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်ပဲသွားသွား ထီးတစ်ချောင်းတော့ ယူသွားဖို့ မမေ့လိုက်ပါနဲ့။ ထီးတစ်ချောင်းဟာ မိုးကိုအံတုဖို့ အကောင်းဆုံး လက်နက်တစ်ခု ဖြစ်ရုံသာမက မိုးမိလို့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေ ဖြစ်တဲ့ ချောင်းဆိုး၊ အအေးမိ၊ ဖျားနာခြင်းတွေကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဒိုင်းတစ်လက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ …………………………………………………………………………………………………. ၂။ အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားသောက်ပါ။ ဖျားနာခြင်းတွေကနေ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားခြင်းပါ။ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ ဟင်းရည်ပူပူလေးတွေ သောက်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဗီတာမင် စီ ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေ စားပေးခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် တုပ်ကွေး နဲ့ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို ကာကွယ်ဖို့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်ကို တိုးမြှင့်စေနိုင်ပါတယ်။ အရသာလည်းရှိ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေက သင့်ရဲ့မိုးအေးတဲ့နေ့တွေကို အနည်းငယ်တော့ ပိုပြီး နွေးထွေးစေမှာပါ။ …………………………………………………………………………………………………. ၃။ လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ စင်ကြယ်အောင် ခဏ ခဏ ဆေးပေးပါ။ အအေးမိ ဖျားနာခြင်း၊ နှာစေးချောင်းဆိုးခြင်း၊ တုပ်ကွေးဖြစ်ခြင်းတွေကနေ ကာကွယ်ဖို့ လက်ကို ပုံမှန်ဆေးပေးခြင်းက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။ ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လက်ကို ပုံမှန်ဆေးပေးခြင်းက ဗိုင်းရပ်စ်တွေ၊ ဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုးတွေ ပြန့်ပွားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ လက်ဆေးတဲ့အခါတိုင်းမှာတော့… “ဖဝါး ဖမိုး၊ လက်ခေါက်ချိုး၊ လက်ကြား လက်မ မကျန်ရ၊ ကုတ်၍ခြစ်ပါ လက္ခဏာ၊ လက်ကောက်ဝတ်မှာ အဆုံးသတ်ပါ။” ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးအတိုင်း စနစ်တကျ နဲ့ သေချာ လက်ဆေးတတ်ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်နော်! …………………………………………………………………………………………………. ၄။ ရေများများ သောက်ပါ။ အပြင်မှာ မိုးတွေရွာနေတဲ့အချိန် နွေးထွေးတဲ့ အရာတစ်ခုခုကို သောက်ပေးခြင်းလောက် ကောင်းတာ မရှိတော့ပါဘူး။ တစ်နေ့ကို သံပုရာရည်နည်းနည်းညှစ်ထည့်ထားတဲ့ ရေ ၆ ခွက်ကနေ ၈ ခွက်သောက်ပြီး သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ရေဓာတ်ကို ထိန်းထားလိုက်ပါ။ ရေနွေးနွေးလေး သောက်ပေးခြင်းက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းစေပြီးတော့ ရောဂါပိုးမွှားတွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုတွေကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ကျန်းမာတဲ့ခုခံအားစနစ်တစ်ခုကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၅။ လူများတဲ့နေရာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ မိုးတွေကြီးရုံတင်မက ရေတွေပါ လျှံတဲ့အထိ ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါ ရောဂါပိုးမွှားတွေ ကူးစက်နိုင်ချေ ပိုများစေနိုင်တဲ့အပြင် သွားရလာရတာလည်း ပိုခက်ခဲစေပါတယ်။ဒါကြောင့် ကားပိတ်တတ်တဲ့ အချိန်တွေကို ရှောင်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ …………………………………………………………………………………………………. ၆။ အကျႌအပိုတစ်စုံဆောင်ထားပါ။ မိုးရွာတဲ့နေ့တွေမှာဆို ရေစိုနိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။ ရေစိုစိုကြီးနဲ့ လျှောက်သွားနေခြင်းက ဖျားနာခြင်း နဲ့ အအေးမိခြင်းတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကို ကို်ယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါပဲ။ ဒီလိုဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ရုံးမှာ အကျႌအပိုတစ်စုံ ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ gym မှာ အကျႌအပိုတစ်စုံ ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဆောင်လို်က်ပါ။ …………………………………………………………………………………………………. ၇။ ရာသီဥတုသတင်းကို အမြဲနားစွင့်ထားပါ။ ရာသီဥတုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းတွေကို ရေဒီယို နဲ့ တီဗွီတွေကနေသာမက ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာပါ မျက်ခြေမပြတ်အောင် အမြဲနားစွင့်ထားပါ။ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီသိနိုင်ပြီး ရေလျှံနေတဲ့နေရာတွေ၊ ကားပိတ်နေတဲ့နေရာတွေကို ရှောင်ကြဉ်လို့ ရနိုင်တာပေါ့။ Crd : https://www.asiaone.com/health/ways-stay-healthy-and-flu-free-rainy-season ...
မေမေတို့ရဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေက ထမင်းကျွေးတိုင်း ပတ်ပြေးနေတတ်တာလား? ကျောင်းကို ထည့်ပေးတဲ့ ထမင်းဗူးတွေလည်း ကုန်အောင်မစားကြဘူးလား? ဒီလိုဆိုရင်တော့ ကျန််းမာရေးလည်းညီညွတ်၊ ချစ်စရာလည်းကောင်းတဲ့ Lunch Box လေးတွေ လုပ်ပေးကြရအောင်လေ။ ကလေးတွေဆိုတာ အရသာကောင်းတာထက် အမြင်လှနေမှ စားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ကြတာပါ။ ဒီတော့ မိမိရဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေ အစာစားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အိုင်ဒီယာလေးတွေကို တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်! ထမင်းနဲ့ ဟင်းတွေ အမြဲထည့်ပေးနေတာထက် ပါစတာလေးတွေလုပ်ပေးကြည့်ပါ။ ပါစတာက ပုံစံမျိုးစုံ city mart မှာအလွယ်ဝယ်လို့ရတာကြောင့် တစ်နေ့တစ်မျိုးထည့်လို့ရတာပေါ့။ မျက်စိအမြင်လှနေအောင် အသီးရောင်စုံလေးတွေပါ ထည့်လို့ရပါသေးတယ်။ ဟမ်ဘာဂါပိစိလေးတွေက ချစ်စရာလည်းကောင်းသလို ကလေးလေးတွေကို ဗိုက်လည်းဝစေတာပေါ့။ တစ်လုပ်စာသေးသေးလေးတွေလုပ်ထားတော့ အစာတွေလည်းထွက်မကျတော့ဘဲ စားလို့ပိုအဆင်ပြေတယ်လေ။ ဆူရှီလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုလည်း အကြံကောင်းပဲလေ။ ထမင်းမစားချင်တဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေလည်း ထမင်းစားဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဆူရှီကို အရသာ (၁) မျိုးတည်းမလုပ်ဘဲ ၊ (၃/၄) မျိုးလောက် လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ စားရတာ အရသာလည်းရှိတဲ့အပြင် ပျော်စရာလည်းကောင်းပါတယ်။ ထမင်းတွေကို အရုပ်ပုံခွက်တွေထဲထည့်ပြီး ပုံလေးတွေဖော်လိုက်ပါ။ အပေါ်ကနေ ကြက်အူချောင်းတွေ၊ အသားပြားတွေ၊ ကြက်ဥတွေကို လိုသလိုဖြတ်ပြီး မျက်လုံးလေးတွေ၊ ပါးစပ်လေးတွေပုံဖော်လိုက်တော့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ထမင်းဆုပ်အရုပ်လေးတွေရပြီပေါ့။ Sandwich လုပ်ဖို့စိတ်ကူးတယ်ဆိုရင်လည်း ရိုးရိုးပေါင်မုန့်နဲ့ပဲလုပ်မယ့်အစား ပေါင်မုန့်ကို ဘေးအသားတွေဖြတ်ပြီး အထဲကမုန့်သားကို အရုပ်ပုံလေးတွေလှီးပြီး လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ အရုပ်ပေါ်က မျက်လုံးတွေ၊ နှာခေါင်းတွေကိုတော့ မေမေတို့စိတ်ကြိုက်ပဲ ပုံဖော်ကြည့်လိုက်နော်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ ထမင်းဗူးလှလှလေးတွေပဲပေါ့။ မီးမီးလေးတွေဆို ပိုအကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ ပန်းရောင်လေးတွေ၊ ဖဲပြားလေးတွေပါတဲ့ ထမင်းဗူးလေးတွေဆို ရိုးရိုးဗူးတွေထက် ပိုလည်းချစ်စရာကောင်းတယ်လေနော်။ သားသားလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ မီးရထားပုံလေးတွေ၊ စူပါဟီးရိုးပုံလေးတွေ ရွေးချယ်ပေးပေါ့။ ကဲ… ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ မေမေတို့ရဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေ ထမင်းမစားမှာမပူရတော့ဘူးလေ။ ဖိုက်တင်းပါ…. မေမေတို့ရေ… ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံလေးတွေနဲ့ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့နေ့လည်စာလေးကို ကလေးလေးတွေအတွက် စီစဉ်ပေးနိုင်ပြီပေါ့နော်။ ဒီလိုချစ်စရာကောင်းပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အပြင် Microwave Safe ဖြစ်တဲ့ (BPA Free) Lock & Lock ထမင်းဘူးလေးတွေကိုတော့ Lock & Lock Showroom များနှင့် နှီးစပ်ရာ Ocean, City Mart, Marketplace ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ...
ကျွန်တော်တို့တွေထဲမှာ လူတွေတော်တော်များများက ဘဝမှာ ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရှာနိုင်လာရင် အောင်မြင်ပြီလို့ထင်ကြတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်တွေ၊ ကားတွေဝယ်ပြီး ပိုက်ဆံတွေသုံးနိုင်နေရုံလောက်နဲ့ ကို်ယ့်ကိုကိုယ်အောင်မြင်နေပြီလို့ မပြောနိုင်ဘူးဆိုပြီး လူတစ်ယောက်ကတော့ ယုံကြည်နေပါတယ်။ လူတွေတော်တော်များများ ကမ္ဘာကြီးပေါ်ကနေ ဘာတွေရယူနိုင်မလဲဆိုတာ တွေးနေတဲ့အချိန်မှာ သူကတော့ လူတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်တွေကိုအသုံးပြုပြီး ကမ္ဘာကြီးကိုတတ်နိုင်သလောက် ပြန်ပြီး အကျိုးပြုသင့်တယ်လို့ တွေးမှတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီလူကိုသိတဲ့သူတွေလည်းရှိသလို သိပ်မသိသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိကြမှာပါ။ သူကတော့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက အာရှတစ်ဝန်းမှာပါ လူသိများထင်ရှားပြီး ပရိတ်သတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ Martial Arts ပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပပေးနေတဲ့ ONE Championship ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူ Chatri Sityodtong ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Chatri Sityodtong ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်း Chatri ကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ Chatri တို့မိသားစုက ဆင်းရဲကြပ်တည်းတဲ့ မိသားစုတစ်စု မဟုတ်ခဲ့ဘဲ ပြည့်စုံတဲ့မိသားစုလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာရှစီးပွားရေးကြပ်တည်းမှု ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် သူတို့မိသားစုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဒေဝါလီခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့ရဲ့မိသားစုအခြေအနေက တဖြည်းဖြည်းပြိုကွဲလာပါတော့တယ်။ ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့အဖေက သူတို့မိသားစုကို စွန့်ပစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိ်ုနဲ့ပဲ အစစအရာရာက သားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Chatri အပေါ်ကိုကျရောက်လာပါတော့တယ်။ ပညာရေးနဲ့ အမေ့ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေ Chatri ကသူတို့မိသားစုနောက်ကြောင်းတွေကို ပြောပြရမှာကိုရှက်မိပေမယ့် သူ့အမေရဲ့ပ့ံပိုးမှုတွေမပါရင် ဘာအောင်မြင်မှုကိုမှ သူရနိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ အမှန်တကယ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့စိတ်ထဲ အကြောက်တရားတွေ၊ သံသယတွေနဲ့ မလုံခြုံမှုတွေပဲ ပြည့်နှက်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာ သူ့ကိုယုံကြည်မှုတွေ၊ ခွန်အားတွေနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပေးခဲ့တဲ့ တစ်ဦးတည်းသောလူကတော့ သူရဲ့အမေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ သူတို့မိသားစုမှာ စားဝတ်နေရေးအတွက် ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှမရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာတောင် Chatri ကိုဟားဗတ်တက္ကသိုလ် (Harvard University) ကိုတက်ဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့သူဟာလည်း သူရဲ့အမေပါပဲ။ သူ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်မှာတော့ အဲဒီကအခန်းကျင်းလေးထဲမှာ သူနဲ့သူ့အမေနှစ်ယောက်သား နေခဲ့ကြရပါတယ်။ ကျောင်းပြီးသွားလို့ Silicon Valley ကိုပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာလည်း အလုပ်ခန်းရဲ့ ကြမ်းပြင်မှာ sleeping bag တွေထဲအိပ်ပြီး သူ့အိပ်မက်ရဲ့ ပထမဆုံးအဆင့်ကိုလှမ်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရတာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ ကံ၊ ဉာဏ်၊ ဇွဲလုံ့လနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့် သူ့မိသားစုအပေါ် ပြန်လည်ထောက်ပံ့လာနိုင်ပြီး စွန့်ဦးတီထွင်ပညာရှင်(entrepreneur) တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Chatri နဲ့ Martial Arts သူ့ရဲ့ရှေ့ဆုံးနာမည်တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Chatri ဆိုတာက ထိုင်းဘာသာစကားမှာ သူရဲကောင်း (Warrior) ဆိုပြီး အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူငယ်စဉ်အရွယ် မွေထိုင်း (Muay Thai) ကိုစတင်သင်ကြားတုန်းကတော့ Chatri ဟာ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူ့ရဲ့ဆရာ Kru Yodtong Senanan ဆီကနေ Yodchatri Sityodtong ဆိုတဲ့ ထူးခြားသောသူရဲကောင်း (extraordinary warrior) အမည်ရတဲ့ ring name ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Chatri ဟာကြိုးဝိုင်းတွေပေါ်မှာတော့ အဲဒီနာမည်နဲ့ ကိုက်ညီအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ နှစ်၃၀ကျော်တဲ့အထိ martial art နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရာတွေမှန်သမျှကို သင်တန်းသားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ လက်ဝှေ့သမားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဆရာ၊ နည်းပြ အစရှိတဲ့နေရာပေါင်းစုံကနေ ပါ၀င်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး martial art ကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တာကြောင့် သမာဓိရှိဖို့၊ နှိမ့်ချတတ်ဖို့၊ လေးစားတတ်ဖို့၊ သတ္တိရှိဖို့နဲ့ စည်းကမ်းရှိဖို့ အစရှိတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကို တတ်မြောက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီအရာက သူ့ရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ ဒုက္ခတွေ၊ အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်အောင် ခွန်အားတွေအဖြစ် လှုံ့ဆော်ပေးတယ်လို့ Chatri ကပြောပါတယ်။ Martial Arts မရှိရင် သူဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာ မသိကြောင်းနဲ့ Martial Arts ကသူ့ကို ဘဝမှာ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ Chatri ကပြောခဲ့ပါတယ်။ Chatri ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် လူတော်တော်များများကတော့ Martial Arts ဆိုတာ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်ခြင်းတွေ ရောနှောနေတဲ့ အားကစားတစ်ခုလို့ အမြင်မှားနေကြပါတယ်။ တကယ်တမ်း Martial Arts ရဲ့အနှစ်သာရကတော့ သင်တို့ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမက အခြားထောင့်မျိုးစုံကနေ တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ ခရီးရှည်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Martial Arts ကလူတွေရဲ့ အလားအလာကို ကောင်းမွန်စွာဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ Chatri ကပြောပါတယ်။ Martial Arts ကလူတွေရဲ့ အားနည်းမှုတွေကို အားသာချက်ဖြစ်လာအောင် ပြောင်းပေးနိုင်သလို၊ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ပယ်ဖျောက်ပေးပြီးတော့ သတ္တိရှိလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် သာမန်လူတွေကို ထူးခြားသွားအောင် ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Chatri ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့တာဝန်တစ်ခုကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဘဝအောင်မြင်မှုတွေကို Martial Arts ကနေတဆင့် ချပြချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Chatri ကသူတည်ထောင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကနေ တချို့သော ဆင်းရဲမှုအပေါ် မတရားတာတွေ၊ မမျှတတာတွေကို ဖော်ထုတ်ပြဖို့ မျှော်လင့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Chatri ဟာ သူနှစ်သက်တဲ့ Martial Arts ကို သူကိုယ်တိုင်ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ နှစ်ရှည်လများစွာကြိုးစားပြီး အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပေမယ့်လည်း ဇွဲမလျော့ဘဲ နည်းပြအနေနဲ့ရော တခြားဘက်ပေါင်းစုံကပါ နှစ် (၃၀) ကျော်အထိ ကြိုးကြိုးစားစားဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ သူရဲ့ ဇွဲမလျော့ဘဲ ကြိုးစားခဲ့တာတွေကတော့ အရာထင်လာခဲ့ပြီး သူနှစ်သက်သဘောကျတဲ့ Martial Arts ကနေရရှိထားတဲ့ သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးပြုပြီး လူတွေကြည့်ရှုခံစားနိုင်အောင် ချပြနိုင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ONE Championship အဖွဲ့ကြီးကလည်း သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Martial Arts ကိုလူတွေလက်ခံနားလည်လာအောင် အာရှတစ်ဝန်းမှာ အောင်အောင်မြင်မြင်ပြုလုပ်လာနိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “အောင်မြင်မှုက သူတို့ကိုလိုက်ရှာဖွေရလောက်အောင် မအားမလပ်တဲ့သူတွေဆီကိုသာ အများဆုံးရောက်နေတတ်ပါတယ်” ဆိုတဲ့ အဆိုအမိန့်တစ်ခုအတိုင်း Chatri လိုမျိုး မိမိတို့နှစ်သက်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုခုကို ကြိုးစားပမ်းစား ဇွဲမလျှော့ဘဲလုပ်ကိုင်မှသာ ဘဝမှာစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုကို ရရှိမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့လည်း အချိန်တိုင်းကမ္ဘာကြီးဆီကနေ ဘာတွေရယူနိုင်မလဲဆိုတာကိုတွေးနေမယ့်အစား ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်းတွေ၊ အစွမ်းအစတွေကို အသုံးပြုပြီးကမ္ဘာကြီးအပေါ်နဲ့ တခြားသူတွေအပေါ်တတ်နိုင်သလောက် အကျိုးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အောင်မြင်မှုကအလိုလိုရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ထင်မိပါတယ်။ ...